नेकपा एमाले र माओवादी हुँदा जे भयो अब त्यो विर्सिएर अघि बढ्नुपर्छ – Maitri News
नेकपा एमाले र माओवादी हुँदा जे भयो अब त्यो विर्सिएर अघि बढ्नुपर्छ
Mohan Bastola March 6, 2019
झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री
२०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री रहेकै बेलाको सरकारले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, बृद्धभत्ता, ‘नौ स’को अभियान जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यो लोकप्रिय सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अहिले हाम्रा सामू हुनुहुन्न । उहाँको ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका झलनाथ खनाल भरतमोहन अधिकारीलाई कसरी सम्झिनु हुन्छ त ? खनालसँग मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
भरतमोहन अधिकारीलाई कसरी सम्झिनु हुन्छ ?
भरतमोहन अधिकारी नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवा नेता मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका एक अथक योद्धा हुनुहुन्थ्यो । नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनका पनि एक योद्धा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको ८२ वर्षको उमेरमा निधन भयो । यो ८२ वर्षको उमेरमा उहाँले धेरै उतार–चडावको समाना गर्नुभयो । यो उहाँको ८२ वर्षको उमेरमा नेपालमा पनि निकै उचार–चडाव देखा परे । अनेकौँ मोड पार गर्दै मुलुक यो अवस्थासम्म आइपुग्यो । उहाँले निरन्तर माक्र्सवाद लेनिनवादको पक्षमा , कम्युनिष्ट पार्टीको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा, देश, जनता र राष्टको पक्षमा आफुलाई दृढतापूर्वक उभ्याउन सफल हुनुभयो । म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु । उहाँको निधनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा, नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा ठूलो क्षति हो । अहिले हामी समाजवादी आन्दोलनमा अघि बढिरहेका छौँ । यो आन्दोलनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन पनि उहाँको अभाव खड्किएको मैले महशुस गरेको छु ।
पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार ०५१ सालमा बन्यो । त्यो बेला भरतमोहन अधिकारी मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री बन्नुभयो । त्यो अवस्थालाई चाँहि कसरी लिनुभएको छ ?
हामीले २०४६–०४७ सालको परिवर्तन गर्दै गर्दा पनि स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको निकै ठूलो योगदान रहेको थियो । मलाई अहिले पनि उहाँको योगदानको सम्झना छ । त्यो परिवर्तनमा उहाँले निर्णायक भूमिका खेल्नुभएको थियो । त्यतिबेलाको परिवर्तनका लागि निकै ठूलो भूमिका खेल्ने क्रममा संयुक्त बाममोर्चाको निकै ठूलो योगदान रहेको थियो । त्यहाँ पनि उहाँको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यो बेलाको भूमिकालाई चाँहि कसरी लिनुभएको छ ?
हो, मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ । त्यो आन्दोलनमा उहाँको निकै ठूलो भूमिका रहेको थियो । हामीले २०४६ सालको भदौमा तत्कालिन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशन गरेका थियौँ । त्यो महाधिवेशनमा हामीले एउटा प्रस्ताव नै पारित गरेका थियौँ । त्यो प्रस्ताव भनेको सम्पूर्ण कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच एकता गर्ने । त्योसँगसँगै हामीले कम्युनिष्ट र काँग्रेसहरु मिलेर ०४६ सालको परिवर्तन गर्न सफल भयौँ । त्यतिबेला मलाई पार्टीले संयुक्त बाममोर्चा निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । हामीले त्यतिबेला नेकपा माक्र्सवादी, नेकपा चौथो महाधिवेशन, नेकपा संयुक्त, नेमकिपा, नेकपा तुलसीलालसँग वार्ता गर्यौँ । ६ ओटा कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई मिलाएर एकतावद्ध बनाएर बाममोर्चा बनाएर अघि लैजाने सन्दर्भमा पनि त्यतिबेला भरतमोहन अधिकारीको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । अझ नेकपा माक्र्सवादीलाई एकतावद्ध बनाउने कुरामा उहाँको भूमिका अतुलनीय रहेको थियो । हामीले त्यसैबेला नेपाली काँग्रेसँग कार्यगत एकता गरेका थियौँ । हामीले कार्यगत एकता गरेर ५३ दिन पुग्दै गर्दा देशमा निकै ठूलो परिवर्तन आयो । त्यो परिवर्तन वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि एउटा महत्वपूर्ण पाटो थियो । इतिहासका लागि एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो । त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले भरतमोहन अधिकारीको नाम छुटाउन मिल्दैन । उहाँ राणाकालमा जन्मिनुभयो । राणाशासन कालमा पनि उहाँ परिवर्तनका लागि अहोरात्र खट्नुभयो । सात सालदेखि १७ सालसम्म राजतन्त्रका विरुद्ध पनि उहाँ लड्नुभयो । राजतन्त्रले गरेको षडयन्त्रका विरुद्ध उहाँले गरेको योगदानको पनि अहिले जति चर्चा गरे पनि कम हुन्छ । त्यति मात्र होइन नेपालमा १७ सालपछि निरङ्कुश पञ्चायतीय व्यवस्थाको सुरुवात भयो । ३० वर्षसम्म रहेको पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध पनि उहाँ निरन्तर लड्नुभयो ।
भनेपछि उहाँको राणाविरोधी र पञ्चायविरोधी आन्दोलनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । उहाँलाई त्यसकारण पनि सम्झिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाई हो ?
उहाँको राणा र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा मात्र होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । समाजलाई अग्रगतिमा लैजानका लागि पनि उहाँको योगदान कम छैन । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि हामीले विभिन्न मोर्चाबाट संघर्ष गर्नु पर्ने भयो । हरेक मोर्चामा उहाँको योगदान कम महत्वपूर्ण थिएन । हामीले सडकदेखि संसद्सम्ममा रहेर संघर्ष गर्नु परेको थियो । ती सबै संघर्षमा उहाँको उत्तिकै महत्व रहेको कुरा अहिले पनि मलाई सम्झना छ ।
सबै भन्दा बढी भरतमोहन अधिकारीको सम्झना ०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्दा उहाँ अर्थमन्त्री रहेको सन्दर्भको चर्चा हुने गरेको छ । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, बृद्धभत्ता, नौ सको अभियान त्यसैबेला चर्चामा आए । यो सन्दर्भलाई चाँहि कसरी लिनुभएको छ ?
हो, ०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेको एकल नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकारको जताततै चर्चा भयो । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, बृद्धभत्ता, नौ सको अभियानको अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । सबै भन्दा पहिला बनेको ०५१ सालको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन हामीेले पनि आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेका थियौँ । अझ उहाँ अर्थमन्त्री रहेका कारण पनि उहाँको योगदान अझ बढी रहेको थियो । तत्कालिन मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले देश, जनता र राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले त्यतिबेला सबै नेता बसेर छलफल गरेर लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । ती कार्यmक्रमलाई भरतमोहन अधिकारीले एकीकृत गर्ने काम गर्नुभएको थियो र बजेट ल्याउनु भएको थियो । हो, अहिले पनि त्यतिबेलाको सरकारको चर्चा हुने गरेको छ । मलाई अहिले पनि याद छ । त्यतिबेला उहाँले मुख्य गरेर तीन ओटा कुरालाई अघि सार्नुभएको थियो । पहिलो आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ, दोस्रो बृद्धभत्ता र तेस्रो भनेको ‘नौ स’को अभियान यी तीन ओटै कार्यक्रम लोकप्रिय भए । आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ अभियान ग्रामिण विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका लागि कोशेढुंगो नै भयो । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा अघि बढाएको ‘नौ स’को अभियानले पनि सन्तुलित ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सहयोग पुर्याएको थियो ।
अरुअरुको पार्टीको सरकार हुँदा नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट पुग्ने गरेको थियो । तर, एमाले नेतृत्वको सरकारले सन्तुलित ढंगले बजेट विनियोगन गरेपछि सबैतिर त्यो सरकारको चर्चा भयो । सरकार गठन भएको छोटो समयमै सर्वत्र चर्चा शुरु भए । लोकप्रिय कार्यक्रमकै कारण देशव्यापि रुपमा एमाले नेतृत्वको सरकारको लहर शुरुभयो । त्यस्तो लहर अहिले नेपालमा दुईतिहाई नजिकको सरकार रहेका बेला पनि आउन सकेको छैन । त्यतिबेला मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएको सरकारबाट अहिलेको सरकारले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
०५१ सालपछि पटक–पटक मुलुकमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बनेको छ । अहिले पनि नेपालमा दुईतिहाई नजिकको कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार छ । ०५१ सालको जस्तो आज ढल्ला कि भोलि ढल्ला कि भन्ने सरकार पनि यहाँ छैन । शक्तिशाली सरकार छ । मनमोहन र भरतमोहनहरुको सम्मानका लागि पनि यो सरकारले धेरै गर्नुपर्ने छ । तपाईँलाई यो सन्दर्भमा चाँहि कस्तो लागेको छ ?
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकार अस्थिर खालको सरकार थियो । त्यसपछि जति ओटा सरकार बने, ती सबै अस्थिर खालका सरकार नै बने । हामी लामो समय अस्थिर सरकारको अवस्थामा नै गुज्रिएका थियौँ । अहिलेको सरकार नयाँ परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । देशव्यापि रुपमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको यो पहिलो सरकार जहाँ कम्युनिष्टको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बहुमत रहेको छ । यो ऐतिहासिक र स्थायी सरकार हो । त्यसैले हामीले यो सरकारबाट विकास निर्माण गर्ने कुरामा यो कुराले बाधा गर्यो भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामीले देशको परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । हामीले जनवादी क्रान्तीलाई पार गरेर आयौँ अब समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । नेपालको पृष्ठभूमिका समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? नेपालको वास्तविकतामा कसरी समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ ? समाजवादका उद्योग कस्तो हुनुपर्छ ? समाजवादमा कृषि कस्तो हुनुपर्छ ? समाजवादका कृषि कस्तो हुनुपर्छ ? समाजवादका सञ्चार कस्तो हुनुपर्छ यो सोचसहित अघि बढ्नुपर्छ ।
सरकारको एक वर्षको अवधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदैछ । यो अवधिमा ऐन–कानुन बनाउने कुरामा नै बढी ध्यान केन्द्रित भएको छ । ऐन–कानुनहरु धेरै जसो बनिसकेका छन् । अब सरकारले जनतलाई लाभ पुग्ने, राष्ट्रलाई लाभ पुग्ने विकास निर्माणक काम गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । अहिले हामी समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढेका छौँ । नेपालमा अहिले नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । त्यसैले अब हिजो नेकपा एमालेमा के भयो होला, नेकपा माओवादीमा के भयो होला त्यो भिन्नै कुरा हो । कतिपय ठाउँमा नेताहरुका बीचमा असमझदारी पनि भयो होला । गुटवन्दी भएहोलान् । अनेक खालका कुरा भए होलान् । अब एकीकृत पार्टीमा कुनै पनि गुटबन्दीको गुन्जायस हुनुहुँदैन । अब यो पार्टीलाई एकतावद्ध र बलियो बनाउने बाहेक अरु केही पनि सोच्नु हुँदैन । पार्टीलाई सुदृढ बनाउने पार्टीलाई बैचारिक रुपमा दह्रो बनाउने, राजनीतिक रुपमा दह्रो बनाउने, सैद्धान्तिक रुपमा, संगठनात्मक रुपमा बलियो बनाउने यो काममा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।
Previous Previous post: सुखानी स्मृति दिवसः शहीदको सपना पूरा गर्दै ओली सरकार
Next Next post: राष्ट्रपति भण्डारी आइतबार न्यूयोर्क जानुहुने